Burmese People: March 2008
ဒုတိယ ပိုင်းအနေ နဲ့ ကျနော်တင် ပြချင်တာလေးတွေ က တော့KTV ၊ (မာဆက်) အနှိပ်ခန်း၊ စားသောက်ဆိုင် များတွင် လှည့် လည် ဖျော်ဖြေ ရေးးအသွင်ဆောင်နေကြတဲ့ မော်ဒယ်မလေးများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်..၊
အလွှာ အသီးသီးမှ ဆင်းသက်လာကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်..၊သူတို့ကျင်လည်ရာ နေရာများကတော့…စားသောက်ဆိုင် အမည်ခံ ကာရာအိုကေခန်းများ၊ အလှပြင်ဆိုင်အမည်ခံအနှိပ်ခန်းများ. .စင်တင်တေးဂီတအမည်ခံ မော်ဒယ်မလေးများ ထားရှိသောဆိုင်များဖြစ်ကြပါသည်..။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်မိန်းကလေးတို့သဘာဝ အလှတရားများကို ဗန်းပြကာငွေ ရှာ ကြသောနေရာများဖြစ်ပါသည်..။
ပထမဦးစွာတင်ပြမှာက ကာရာ အိုကေခန်းမများ..တွင် ကျင်လည်ကြသော မိန်းကလေးများ၏ ဘ၀ အကြောင်းဖြစ်ပါသည်..။
ထိုမိန်း ကလေးများသည်အသက်အားဖြင့်(17 နှစ်မှ30)၀န်းကျင်သာရှိကြပါသည်။ထို မိန်းကလေးများ ရုပ်ရည် အ တန်သင့်ရှိကြပြီးပညာရေးအနေနှင့် တော့အချို့ က အခြေခံအဆင့်အချို့ကတော့တက္ကသိုလ်များတွင် ကျောင်း တက်ဆဲ မိန်းကလေးများပါ ပါဝင် ပါသည်။ပထမနှစ်..ဒုတိယနှစ်ကျောင်း သူများပါဝင်နေကြမှာထူးခြားမှု့တခု ဖြစ်ပါသည်..။သူတို့၏ပြောဆိုချက် အရ ပညာဆက်လက်သင်ရန်အတွက် ငွေကြေးမပြည့် စုံခြင်း၊မိဘများမှစီးပွားရေးကျပ်တည်းလာမှု့ကြောင့်ကျောင်းစရိတ်ဆက်လက်မပံ့ပိုးနိုင်တော့ခြင်းတို့ကြောင့်ပညာအတွက် ဘ၀ ကို နှစ်ကြ သူများ ဖြစ် ပါသည်။ ထိုမိန်းက လေး မျိုးသည်များသောအားဖြင့်အလုပ်သဘောဆက်ဆံမှု့ မှလွဲရ်ျလူသိမခံကြပါ ။နောက်ထိုအထဲတွင်အများဆုံး ရောက်ရှိလာကြသူများကတော့ယခင်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများတွင် နယ်မှနေရ်ျလာရောက်လုပ်ကိုနေကြသည့်အထည် ချုပ် သမ လေးများဖြစ်ပါသည် ။ပြည်ပ မှလာရောက်လုပ်ကိုင်ကြသောအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံရေးအခြေနေအရသော်၎င်း ၊အစိုးရ၏စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအပေါ်သဘောထားပြောင်းလဲလာခြင်းကြောင့်သော်၎င်း ၊လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲရာတွင်လုံ လောက်စွာမရရှိမှု့ ကြောင့် သော်၎င်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းခဲ့ ကြပါသည်..။
ထိုအခါတွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများမှမိန်းကလေးတော်တော်များများအလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ ရပါသည်..။ ထိုမိန်းကလေးများ သည်မိမိ ဘ၀ ရပ်တည်ရေး နှင့် အခြားအလုပ်များပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်အလုပ်ရှားပါးမှု့တို့ကြောင့်အ၀င်လွယ် အထွက် လွယ်ငွေရလွယ်သောကာရာအိုကေခန်းများတွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြရင်း ယခုတိုင်ရုန်းမထွက်နိုင်သူအများအပြားရှိနေ ကြ ပါသည် ။ နေထိုင်ကြသည့်ပုံစံများကတော့အလျှင်းသင့်သူများနှင့်တိုက်ခန်းများစပ်တူဌားရမ်းနေထိုင်ကြခြင်း ၊ဆိုင်များမှစီစဥင်္ပေးသောအဆောင်များတွင်နေထိုင်ကြခြင်းများစသည်ဖြင့် နေ ကြ ပါသည် ။စားရေးသောက်ရေးအနေနှင့်ကတော့မနက်ခင်းပိုင်းတွင်မိမိငွေဖြင့် ဝယ်စားညစာ အတွက်မူ လာ ရော က် ကြ သောဧည့်သည် များထံမှကျွေး သမျှ ဖြင့်ချို့ချန် ကာ ရသမျှ ငွေ ကိုစုပြီး အဝေးမှမိဘ များကိုထောက် ပံ့ ကြပါသည် ။
ရန်ကုန်မြို့နေရာအနှံ့တွင် သွားရင်းလာရင်းတနေ့တခြားများပြားလာသောမြင်ကွင်းတွေ ထဲ မှ စိတ်မသက်သာဖွယ်မြင်ကွင်းတခုကတော့ ….ဘ၀ နှင့်ခန္ဒာ ကိုယ်ကိုအရင်းအနှီး ပြု ကာငွေ ရှာနေကြသည့်..အမျိုးသမီးငယ်လေးများ.. များပြားလာခြင်းဖြစ်ပါသည်….။ထို့အတူ.. လူမြင်ကွင်းမဟုတ် ပဲ အနှိပ်ခန်း များ. .KTV.ကာရာအိုကေ.. စင်တင်တေးဂီတ.. တို့လို..တိူက်ခန်းများဆိုင်ခန်းများတွင် လဲ ဘ၀နှင့်လဲ ကာငွေရှာနေရ သည့်မိန်ခလေးငယ်များ၏ဘ၀များမှာ တကယ်တော့နာကြည်း ဖွယ်ခံစားမှု့ တွေ အပြည့် ပါ .. ။
ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းဟူသည် မှာဘုရားရှင်လက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့ သောလုပ်ငန်း ဖြစ်သော် လည်း ဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလပဲ ဖြစ်ဖြစ်အမြင်မတင့်တယ် ပါ….။
ပြည်တွင်းက ပြည်သူတို့၏လူနေမှု ဘ၀ကိုအဓိက ထားပြီးတင်ပြနေတဲ့ ရန်ကုန်သားတယောက် သူတို့ဘ၀ကို လေ့လာကြည့် မိသလောက်တင် ပြလိုက် ရ ပါစေ… ။သူတို့ ကျင်လည် ရာ လော က ထဲ မှာ လဲ အလွှာအသီးသီးရှိပါသည် ။တခုခြင်းစီတင်ပြရသော်…………………..။
လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းများပေါ် မိန်းခလေး…များ..။ထိုအလွှာတွင်အသက်(14-15) နှစ်မှ (35-40) ထိအရွယ်များစွာပါဝင်လှုပ်ရှားကြသည်။ကျက်စားရာလူခေါ်ရာနေရာများမှာ..ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမအလယ်ဘလောက်နှင့်တံတားဝန်းကျင်၊အနော် ရထာလမ်းမပေါ်ရှိ ကားမှတ်တိုင်များ.. လမ်းလေးဆယ်..ဘားလမ်း..လမ်းသုံးဆယ်မှတ်တိုင်များတွင်ပိုမိုတွေ့ရသည်။နောက်..သီရီမင်္ဂလာဈေးတ၀ိုက်.. တောင်ဥက္ကလာဝေဇန္တာလမ်းမပေါ်..စော်ဘွားကြီးကုန်းကားဝန်းဟောင်း..တာမွေဈေးတ၀ိုက်..သိမ်ဖြူလမ်း (ဆရာဝန်များအသင်းတိုက်အနီးညမှောင်ချိန်များ) နေ့ လည်ခင်းများတွင်.. မြို့ထဲ ရုပ်ရှင်ရုံများအောက်တွင်အများဆုံးမြင်တွေ့ နေရ ပါသည်..။ထိုမိန်ကလေးများမှာရန်ကုန်မြို့တွင်းမှမဟုတ်ကြပါ..အများစုမှာ သံလျှင်.. ဒလ တောင်ဒဂုံ..ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ..ကြည်မြင်တိုင်တဖက်ကမ်းအေးရွာ..လှိုင်သာယာစသော နေရာ များတွင်အနေများကြသည်။တချို့ နယ်ဝေးမှမိန်းကလေးများမှာတော့အခန့်သင့်သလို (ဥပမာ-ဘူတာကြီးမှမီးရထားဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းများမှနောက်ဖေးတွင်အဖီလေးများချထားသောကျောတနေရာ စာတွင် တညတာအိပ်စက်ရန်အတွက်ဘယ်လောက်ဟူရ်ျပေးနေခြင်မျိုးများ)ရှိပါသည်..။သူတို့၏အလုပ်ချိန်မနက်ခင်း (၁၁း၀၀) လောက်မှစတင် ကာမိမိကျက်စားရာနေရာ များသို့ရောက် ရှိပါကြပါသည်။ထို အချိန်မှစတင် ည (၁၁း၀၀) နာရီလောက်ထိသူတို့၏ခန္ဒာကို ယ်အား..အခစားဖြင့်ဌားရမ်း ကြပါသည်..။စားသောက်ကြ သည်မှာတော့ပလက်ဖောင်းဘေးမှအ၀စားထမင်းဆိုင်လေးများဖြစ်ကြပါသည်..။ည(၁၁း၀၀)ကျော်လျှင်တော့ကြုံ ရာ ကားများဖြင့်တဆင့် ပြီးတဆင့်အိပ်တန်းပြန်ကြပါသည်..။ရှိလာသောငွေကြေးများကိုတော့သူတို့၏ကိုယ်ကြိုးအတွက်သုံးကြသည့် အလွန်နည်းပါး ကြပါသည် ..။နာတာရှည် မိခင်… ဘုစုခရုလေးများတန်းစီပြီးမွေးကာအချိန်ပြည့်နီးပါမူးနေသောဖခင်.. အမိမဲ့အဖမဲ့ အရွယ်လွန်ဖိုးဖွားများနှင့်သာကြီးပြင်းခဲ့ ရ သောသူများ… မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်မိမိဘ၀ကိုချရင်းခဲ့ ရ သူမိန်းကလေးများ…..ရိုးရိုးသားသားလုပ်ကိုင်စားချင် ပါသော်လည်းငယ်စဉ်ကကောင်းမွန်စွာပညာမသင်ကြားခဲ့ ရ မှု့ကြောင့်အလုပ်အကိုင်ရှားပါခြင်း. ၊တမြို့တရွာမှလာရ်ျရန်ကုန်မြို့ရှိလူကုန်တန်အိမ် များတွင်. .အိမ်ဖော်လုပ်ရင်းအိမ်ရှင်ယောင်္ကျားများမှလူမသိသူမသိအစော်ကားခံ ရကာ.. ဘ၀ကို မထူးဇါတ်ခင်းခဲ့ ကြသူမိန်းကလေးများ.. စသည် ဖြင့်ရင်နာဖွယ်ရာ ဘ၀ဇါတ်များစွာဖြင့်ရောက်ရှိ လာခဲ့ ကြပါသည်။ လမ်းပေါ်တွင်လုပ်စားသည်ဆိုသော်လည်းအဖိုးအခကို အပြည့်ရသည် မဟုတ်(ခေါင်း) လုပ်သူအတွက်အချိုးအဆနှင့်ပေး ရပါသည် ..။ထို(ခေါင်း) များမှာလည်းသက်ဆိုင်ရာရဲ.နယ်ထိန်းများကိုလည်းငွေလိုလျှင်ငွေ.. လူလိုလျှင်..တဆင့်ဒါနပြုကြမှ၎င်းတို့လုပ်ငန်းအတွက်ဘေးကင်းပါမည်ဖြစ်သောကြောင့် ပေးကမ်းကြရပြန်ပါသည်… ။ ထိုအလွှာမှမိန်းကလေးများအဖို့တော့နူရာဝဲစွဲ လဲရာသူခိုးထောင်း ဖြစ်နေရပါသည်..။
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 22:200comments
အရင်တုန်းကအချိန်..အခုအချိန်..ပြီးတော့နောက် လာမယ့်အချိန်..........(ဒုတိယပိုင်း)
အမှန်တကယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်တွေ ကို ဘေးချိတ်ထားတယ်နေရာမပေးဘူး။ဘယ်နေရာမဆိုသူသူတို့လုပ်လို့ရမယ်ပဲ ထင်နေတယ်..ဖြစ်တော့ဖြစ် ပါတယ်(သောက်)တလွဲတွေ. ခုပဲကြည့်ဦးနောက်တခုပြောပြမယ် . တက္ကစီတွေ မှာမီတာတပ်တယ်တဲ့ .ပိုင်ရှင်တွေ ကမတပ်မနေရဆိုတော့တပ် တယ်..သတ်မှတ်ထားတဲ့ နှုန်ထားနဲ့ တောင်းလားဆိုတော့ခရီးသည်မြင် မှာစိုးလို့လက်ကိုင်ပ၀ါလေးနဲ့ဖုံးထားကြတယ်.ဘ ယ်နေရာမဆို သေချာစဉ်းစားကြဖို့ကောင်းတယ်..ဗျာ။ပြောလိုက်သေးတယ်စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံ ရ်ျခေတ်မှီတိုးတက်သောနိုင်ငံတော် ကြီးတည်ဆောက် အံ တဲ့ ..ဘယ်တော့မှ မမျှော် လင့်လေနဲ့..နည်းပညာမပါပဲနဲ့ဘယ်တော့မှမတိုးတတ်ဘူး..ဟိုအရင်တုန်ကတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်…..ယနေ့မျက်မှောက် အချိန်မှာတော့တက်တက်စင်အောင် လွဲနေပြီဗျ……။ကြက်ဆူပင်တွေ စိုက် တယ် ဘာဖြစ်လာလဲ..နေကြာပင်တွေ စိုက်တယ် ဘာဖြစ်လာလဲ ..ကျနော် တို့ပြည်တွင်းမှာတော င်ကြက်ဆူဆီ(ဘိုင်အိုဒီဇယ်)တဂါလံ ဘယ်လောက်ဆိုပြီးဈေးကွက်ပေါ်ပေါက်လာပြီလား…နိုင်ငံတကာတင်ပို့ဖို့ နေသာသာပြည်တွင်းဈေးကွက်အနေနဲ့တောင်မဖြစ်ထွန်းသေးဘူး….ကုန်ကျစားရိတ်ကတော့အဲ ဒီအတွက်သောက်သောက်လဲ ကုန်ထားတာ…လုပ်ချင်တာတွေ လျှောက်လုပ်နေတော့တာ ပဲ အဲ ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ သိလား….သူတို့ကိုယ်တိုင်မတတ်ကျွမ်းလို့….ပညာရှင်တွေ ဘေးချိတ်ထားလို့ဖြစ်ရတာတွေ ပဲ ….စစ်တိုက်တဲ့ ပညာ..လူသတ်တဲ့ ပညာတွေ တတ်နေရုံနဲ့ တော့တိုင်းပြည် ကို ဘယ်လို မှအုပ်ချုပ်လို့မရ ဘူး……အမှန်တတ်သိနားလည် တဲ့ သူတွေ ကို ပဲ အုပ်ချုပ်စေချင်တယ်ဗျာ…..ကျနော့်သဘော ပြော ရ ရင် တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ သူကို လူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ မရွေးချယ်ဘူး…ရွေးချယ်တဲ့ သူ ဟာ..တိုင်းပြည်အတွက်..ပြည်သူတွေ အတွက်ဘယ်လောက်…တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင် မလဲ ဆို တာ ကို ပဲ အလေးထားမယ်ဗျ….။
နောက်တခုကျနော်တို့တိုင်း ပြည် က သယံဇာတတွေ ….ကုန်ခါနီး ပြီ…..နောင်အနှစ်နှစ်ဆယ်ဆိုရင်မြေကြီးတူးရောင်ဖို့ပဲ ကျန်တော့မယ်……။ပြည်ပ အားကို ပုဆိန်ရိုးတဲ့ ….သူများတွေ တော့ပြော တယ် ဗျာ..သူတို့ကရောပြည် ပ နဲ့ ကင်း ကြလို့လား…။စကားစပ်မိတုန်းအားလုံးကို အသိပေးလိုက် မယ်ဗျာ..ဟိုတလော က ရုရှားက ကုမ္မဏီတခု နဲ့ မြန်မာအစိုးရ က စာချုပ်တခုချုပ်လိုက်တယ်.(ချင်းတွင်း).ဥရုမြစ်ရိုးတလျှောက်မှာရွှေနဲ့ ဆက်စပ်သတ္တုပစ္စည်းများရှာဖွေ ရေးဆို ပြီးတော့လေ…….အဲ ဒါအဓိက ရှာ မှာ က ယူရေနီယံသတ္တု ပဲ ..ရွှေဆိုတာ က လူကြားကောင်းအောင်ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတာဗျ…အဲဒီဖက် ဒေသခံ တယောက် ကပြောသွားတာ..ခုစလုပ်နေပြီ..ပေါက် ရောက်တဲ့ သူတွေ က အချိန်မီတားဆီးပေး ကြ ပါ ….ဒေသ ခံ တွေ ကတော့ခုလက် ရှိရှာနေကြတာ က ရွှေ ရယ်..ရွှေ ဖြူ(ပလက်တီနမ်) ရယ်ပဲ ရှာနေကြတာ…။တိုင်းပြည်ကို လက်သိပ်ထိုးပြီးရောင်းနေပြီ … ။နူကလီးယားလက်နက်အတွက်ကြိုတင်ကြံစီမှု့ရှိနေပြီ….။တိုင်းပြည်မှာအန္ဒရာယ်ကြီးနေပြီ…. အကျဉ်းချုပ်ပြောရင်….ပြည်သူတွေ ဟာမိမိအနာဂါတ်ကို မိမိရွေးချယ်ကြပါ…..အချိန်မီရုံလေးပဲ ရှိတော့တယ်…ခုချိန်မှာ အမှားမခံ တော့ဘူး…..ခုချိန်တခါမှားတာနဲ့ နောင် ဆွေ စဉ်မျိုးဆက်သားစဉ်မြေးဆက် ခံ ရတော့မှာ ပါ ….ကြောက်စိတ်တွေ ကို ခေတ္တဘေးဖယ်ထားကြပါစို့.ဟူရ်ျတိုက်တွန်းလိုက် ပါ ရ စေခင် ဗျာ……..
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 07:19 1 comments
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 05:030comments
အရင်တုန်းကအချိန်..အခုအချိန်..ပြီးတော့နောက် လာမယ့်အချိန်..........
တချိန်တုန်း ဥိးလေးက စစ်တပ်ထဲ ကပါ..ခုတော့ကွာ ရ တဲ့ ပင်စင်လခလေးကမဆိုစလောက်လေးနဲ့ ငါလို ခြေတဖက်ပြတ်နေတဲ့ သူဘယ်လို ထမင်း ၀ ပါ့မလဲညီလေးရာ..နောက် ဆုံးတော့လဲမင်းခုမြင်နေတဲ့ အတိုင်ပဲညီလေး..ဆိုပြီးဝမ်နည်းစို့နင့်စွာနဲ့ ပြော လာခဲ့ တဲ့ တချိန်တုန်းကတိုက်ပွဲပျော်ကြီးတဦးပါ..ခုနေမှာတော့လမ်းဘေးမှာပိုက်ဆံတောင်းရသူတဦး ပါ….
ခုလက်၇ှိအချိန်မှာဘယ်နေရာ မှာ ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင့်အတန်း ခွဲခြားမှုတွေ အရမ်းဆိုးဝါးနေပါတယ်..တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ခဲ့ တဲ့ သူတဦးကို ခုလိုပစ်စလက်ခက်ထားတာမကောင်ဘူးဗျ…အောက်ခြေက စစ်သားတွေ ရဲ့ ဘ၀တွေ ဟာ ချို့တဲ့ စွာနဲ့နေကြရတာပါ..ကိုယ်အင်္ဂါတခုခုချို့တဲ့သွားတဲ့နေ့မှာတော့ကျောထောက်နောက်ခံ မိသားစုအသိူင်အ၀ိုင်း မရှိလို့ကတော့လမ်းဘေးရောက်သွားကြတာကြီးပါပဲ ။အောက်ခြေက စစ်သားကြီးတွေ မှာတော့ တဖြေးဖြေးနဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ကို ယ်ခံ ဆို တဲ့ စွန့်ပစ်ခံ ဘ၀ကိုရောက်နေပါပြီ ။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ နဲ့ ပလဲ နံ ပသင့်တဲ့ သူတွေ ။သူတို ရဲ့ သားသမီးတွေ ကျတော့ကောင်းပေ့ညွန့်ပေ့အခွင့်အရေး ရ ပါ ပေ့ဆိုတဲ့ နေရာ တွေ မှာ နေရာ ယူထားကြတယ် ။အာဏာဆိုတာကို ထင် သလို အသုံးချကြတယ်၊တဖြေးဖြေးနဲ့ ပြည်သူအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ က မမှန်တော့ဘူး၊အဲ ဒီလို စိတ်ဓါတ်မမှန်လာတဲ့ အခါကြတော့ဘုန်းကံမြင့်မားနေတုန်းလေးခဏ ပဲ ပြီးတာနဲ့ သူတို မိသားစုနဲ့ ဘယ်သူမှမပါတ်သတ်ချင်ကြတော့ဘူး။ဥပမာပြောရ ဗျာလူငယ်တွေ ပါသိအောင် ဦးခင်ညွှန့်နဲ့ ဥ ပမာ ပြမယ်။တချိန်တုန်းက ဆိုရင် ဘုန်းမီးနေလအတော်ကြီးမားခဲ့ သူ ပါ။အမှန်တကယ်လဲ တော်ပါတယ်..လမ်းတံတားတွေ ကို တော် တော် လေး တည်ဆောက် ခဲ့ သူ ပါ။အဲ ဒီမှာ ပဲ တံတားတခုတည်ဆောက်ခြင်း အားဖြင့်ရရှိလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို သိလာတယ်။တံတားတစင်းဆောက်တာနဲ့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဘယ်လောက် ရ လဲ ဆို တာ သိသွားပြီ။ပြည်သူ ပိုင်ပိုက်ဆံ ကိုတံတားတစင်းဆောက် ပြပြီးမှကျန်တာ အိတ်ထဲ ထဲ့ တာ ကောင်း တယ်လေ..အများအမြင် လဲ ကောင်း တာ ပေါ့ နော် ။အဲ ဒီလို ရ မှန်း သိတော့ဆောက် လို က် တဲ့ တံ တားတွေ လေ..ပြည်သူ့အတွက် ကောင်း တာ က နဲ နဲသူတို့အတွက် ကောင်း ကွက် က များများ အမှန်တကယ်လို တဲ့ နေရာတွေ ကြတော့လက်ရှောင်ကြတယ်ဝေးလံ ခေါင်း ပါးတဲ့ နေရာ တွေ လေ..။ပြော ရ ရင်တော့အများကြီး ပါ..နောက် ဆုံးသူကြဆုံးချိန်မှာတော့ ..ဘယ်သူမှအဖက် မလုပ်ကြတော့ဘူး..နောက် ဆုံးကုန်ကုန်ပြော ရ ရင်ဘာသာရေး သာသနာရေးအတွက် လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ဘုရားလူကြီးတွေ က အစ အရေး မလုပ်ကြတော့ဘူး..လေရွှေ တိဂုံဘုရားမှာဦးခင်ညွန့်ထီးတော် တင် တုန်းက ပုံတွေ ခုချိန်မြင်ရသေး လား…မန်းတလေးဘုရားကြီးတောင်ဖက် စောင်းတန်းမှာပြထားတဲ့ ဦးခင်ညွှန့်ပုံတွေ ခုမြင်ရသေး လား…အဲ ဒါပဲ …
ခုခေတ်မှာ ဘုရားလူကြိးတွေ က အစဖော်လံ ဖားနေကြတယ်….။စစ်ဗိုလ်တွေ က လဲနေရာ တကာကို ပါ ကြတယ်..။ဘုရားဂေါ ပ က ထဲ လဲ ပါချင်..ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ ထဲ လဲ ပါချင်..၀န်ကြီးဌာနတွေ လဲ သူတို့မပါတာ မရှိဘူး။ကျန်း မာရေးဌာနဆို ပါ တော့သူတို့သင်ခဲ့ ရ တဲ့ တိုက်ရေး ခိုက်ရေး ပညာတွေ နဲ့ ဘာဆိုင်လဲ …ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားဌာနဆို ကြည့်ဦး နိုင်ငံ ခြားဧည့်သည် ဘယ်နှစ်ဦး ခေါ်နိုင် လဲ ဘယ်လိုတွေစီမံ နိုင် လဲ ပိုက်ဆံ ရတာ ပဲ သိတယ်..သူတို သင် ခဲ့ရ တာ တွေ နဲ့ က တခြားစီပဲ …အဲ ဒီတော့သိသိမသိသိပိုက်ဆံ ရတာ ပဲ ဆို ပြီး မတတ်ပဲ နဲ့ လုပ်ရော ..နောက် ဆုံးသောက် တလွဲတွေ ဖြစ်တော့မှဟို လူ ကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဆို ပြီး လွှဲ ချ……
(ဒုတိယ ပိုင်းကို ဆက်လက် အားပေး ပါ ရန်)
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 23:572comments
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 06:31 1 comments
ကျနော်တို့ကိုမောင်သီးဆိုသူတယောက် က cbox မှာဝင်ရေးလာတယ်ချောင်ကြိုချောင်ကြားကပုံတွေ ကိုရိုက် ပြီးတော့အစိုးရ ကိုသိက္ခာမချပါနဲ့တဲ့..ပြော ပုံလေးက..အပြည့်အစုံကိုကူယူဖော်ပြလိုက် ပါ တယ်….
မောင်သီး: အဆိုးမြင် စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ အစိုးရ သိက္ခာကျအောင် လိုက်ချမနေပါနဲ့ ခင်ဗျ၊ ဘယ်သူ့ အတွက်မှ မကောင်းပါဘူး
5 Mar 08, 04:54
မောင်သီး: နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဆင်းရဲ မွဲတေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ ရှိပါတယ်
5 Mar 08, 04:53
မောင်သီး: ဂျောင်ကျိုဂျောင်ကြားက ပုံတွေကို အပြစ်ရှာလိုက် ရိုက်မေပါနဲ့
ကျနော် တို့လိုဖော်ကောင်နဲ့လဲ တွေ ရော..အနာပေါ်ဒုတ်ကျအခံ ရ ဖြစ်ပြီပေါ့..သူတို့လိုကပ်ပါးကောင်တွေ ရှိနေကြလို့လဲကျနော် တို့ပြည်သူတွေ လုံးပါးပါးရ တာ ပါ..။ကျနော်တို့ကတော့ထင်တယ်..လူကြီးလမ်းကြောင်းရှိလို့လမ်းဘေးသစ်ပင်တွေ ကို ထုံးသုတ်…ခြံစည်းရိုးတွေ ကို ၀ါးကပ်လေးကာပြီးထုံးသုတ်…ဖာရာဗရပွနဲ့လမ်းတွေ ကိုသဲဖြူးပြီးခဏတာကြည့်ကောင်းအောင် ပြင်..တိုက်ပုံဖြူလေးဝတ်.. လက်အုပ်ကလေချီမျက်နှာပေးကကြောင်သေမမျက်နှာပေးလေးနဲ ..ပါမစ်လေးများချပေးခဲ့လေမလားဆိုပြီးမျှော်လင့်ချက်တွေ နဲ့ဖားယားနေသူတွေ ထဲ မှာမောင်သီးတယောက်ကိုမြင်ယောင်လာတယ်….
ခုလိုမောင်သီးစလိုက်လို့အပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေထပ်မံဖော်ပြလိုက် ပါတယ်…အဲဒီကလေးတွေ ဟာမိဘတွေ က ကျောင်းမုန့်ဖိုးမပေးနိုင် လို့ကျောင်မုန့်ဖိုးရဖို့အတွက် မြစ်ကမ်းနဘေး..က မ်းစပ်မှာသံတိုသံစရှာပြီးအလေးချိန်နဲ့ဝယ်သူဆီမှာပြန်ရောင်းရတယ်..ရတဲ့ပိုက် ဆံလေး..ငါးဆယ်တစ်ရာကိုမှကျောင်းမှာမုန့်ဝယ်စားရတယ် ..ဒီကလေးတွေ ဟာအချိန်မရွေးရေနစ်နိုင်တယ်..ခြေထောက်ကို သံစတွေ ပုလင်းကွဲတွေစူးနိုင်တယ်…လေ
တကယ်လိုများမောင်သီးရယ်ဒီကလေးတွေ ဟာမင်းသားသမီးလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့ မယ်..ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်…ဒီစကားမျိုးတွေ ကိုမင်းပြောနိုင်ပါဦးမှာလား…
ရန်ကုန်သားတယောက်ကတော့ဆက်လက်ပြီးဖော်ကောင် လုပ်နေဦးမှာ ပါ…ကို ယ့် ပေါင်ကိုလှန်ထောင်းနေဦးမှာပါ….အားပေးနေသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်…ဖုံးဖိထားတာတွေ ပေါ်ကုန်လိုစိတ်ညစ်သွားသူတွေ ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 06:410comments
ယနေ့ထုပ်ဝေသောမြန်မာ့ အလင်းသတင်းစာ တွင်၅လပိုင်းတွင်ပြုလုပ် မည့်ဆန္ဒခံယူပွဲတွင်ထောက်ခံမဲမပေးသည့်သူများကိုခြိမ်းခြောက်သည့် စာသားမျိုးပါရှိလာပါသည် ။အထက် ပါ စာသားသည်လွတ်လပ်စွာဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်ကိုဖောက်ဖျက်ရာရောက် ပါ သည်။ထို့အပြင်နအဖ၏ဆန္ဒခံယူပွဲတွင်ထားရှိသောမရိုးဖြောင့်ကောက်ကျစ်မည့်အရိပ်ရောင် များသည်သိသာထင်ရှားစွာပေါ်ပေါက်လာပါသည်..။ထိုကြောင့်အများပြည်သူတို့အနေဖြင့်မိမိဆန္ဒဖြင့်လွတ်လပ်စွာမဲပေးခွင့်ရ ရှိရေးအတွက်ပြည် သူတိုင်းတွင် တာဝန် ရှိပါသည် ။
နအဖ မှ ယခုကဲ့သို့ခြိမ်းခြောက်မှု့များဆက်လက်ပေါ်ပေါက်လာပါက ဆန္ဒခံယူပွဲအား(လုံးဝ)ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့်ဆန္ဒခံယူပွဲအားအသိအမှတ်မပြုသင့်ပါကြောင်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်..။
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 06:142comments
ယခုမြင်တွေ့ နေရ တဲ့ မြင် ကွင်းတွေ ကို သုံးသပ်ကြည့်ကြ ပါ စို့ .......
ရှု့့ခင်းတွေ က သာယာမှုတော့ရှိ ပါ ၏ ။ သို့သော်ဤ ၀န်းကျင်တွင် မှီတင်းနေထိုင် ကြသော သူ များသည်..ထမင်းတနပ် အတွက် ပင်ပန်းကြီး စွာရှာဖွေ နေကြ ရ ပါ သည်..။၀မ်းရေးအတွက် အချိန်ပြည့် ရုန်းကန်နေကြ သူ များဖြစ်သောကြောင့်လဲ အသိအမြင် ဗဟုသုတများလဲ နည်း ပါးကြ ပါ သည် ။ဤကဲ့ သို့ဘ၀များတွင် နေထိုင်ကြ သောကျေးလက် ပြည် သူ အများအပြား ရှိ ကြ ပါ သည်..။ထို အရာ များကိုတော့ကျနော် တို့ခေါင်းဆောင် ကြီး များ က သဘာ ၀ အလှမြင် ကွင်းများ ဟု စကားလှလှ သုံးထား ကြ ပါ သည် ။အမှန်မှာ…ငတ်မွတ်နေကြသည့်ပြည် သူ များ…မနက် ဖြန်အတွက်ထမင်းတနပ် ကို ပူပင် နေကြ သူ များ…အရာရာ ချို့ တဲ့ နေကြ သည့်ပြည်သူများသာဖြစ် ပါ သည်…။ထိုကဲ့ သို့အသိမြင် နဲ ပါးဆင်းရဲ နွမ်းပါးနေကြ ပြည်သူများကို..ချော့တခါခြောက် တလှည့် ဖြင့်ဆန္ဒခံ ယူပွဲ အတွက် ခေါင်းဆောင် ကြီးများအသုံးချမည့်အရေး
ရင် လေး မိပါ သည် ……
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 03:150comments
တိုင်းပြည်ကြီးခေတ်မှီတိုးတက် လာသောကြောင့် ပြည် သူများ ယခုပုံတွင်တွေ့မြင် ရ သည့်အတိုင်းကြီးပွားချမ်းသာနေကြ ပါ သည် ။
ခေတ်မှီ ဈေးသစ် ကြီး များမှာ လဲ ဤ ကဲ့ သို့စည် ကားသိုက် မြိုက် စွာဖြင့် …
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 01:490comments